Dharka → Dharka xayeysiinta ah • Xirfadlaha kombiyuutarka ee P&M
Xigasho deg deg ah
Carara waa labis caan ah, oo badanaa loola dhaqmo sidii shey joogto ah shaqada ama dharka xayeysiinta, kaas oo u oggolaanaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa badan ka badan jaakada, iyadoo la ilaalinayo dharka shaqalaha gaarka ah ee shaqaalaha.
Dhogorta waa shey weyn oo loogu talagalay daabacaadda kumbuyuutarka
Faa'iidooyinkan ayaa ka dhiga dhogorta inay aad caan uga tahay warshado badan. Iyagu waa xulasho isdaba joog ah oo loogu talagalay shaqaalaha, iyo kuwo kaleba, xagga wax soo saarka, saadka iyo warshadaha dhismaha, laakiin sidoo kale ujeeddooyin gaar ah sida dhar wax ku ool ah oo diiran oo loogu talagalay nashaadaad kala duwan.
Adler 506 dhogorta ragga oo leh suurtagalnimada shaashad kasta
Xulo ballaaran oo ah dhogorta ayaa laga heli karaa annaga dukaan wuxuu ku yimaadaa palette midab hodan ah.
Thanks to this, waxaad ku hagaajin kartaa doorashadaada inaad ku aqoonsato midabada shirkadda.
Intaa waxaa sii dheer, shaqsi ahaaneed cimri dheer oo qurux badan, waxaad dalban kartaa in lagu dilo dhogorta daabacaadda kumbuyuutarka. Waxaan ku iibinnaa moodooyinka dumarka, ragga, carruurta iyo unisex noocyo kala duwan.
Booqo dukaankeena internetka >>
U bax sida xulasho isdaba joog ah oo dharka labiska
Jaakadaha qulqulaya ee laga heli karo bakhaarradeena waxaa soo saaray shirkado sida madaxa iyo Leber & Hollman.
Waxaan bixinaa xulashooyin kaladuwan oo moodello ah iyadoo kuxiran doorbid shaqsiyeed - si buuxda loo siibay ama lagu qalabeeyay kaliya jiinyeer gaaban oo qoorta ah, dabool leh ama aan lahayn.
Moodooyin badan ayaa leh qalab wax lagu dhejiyo oo la taaban karo, kaas oo kahortagaya qabowga, tusaale ahaan marka aad ka shaqeyneyso bannaanka ama xaaladaha qaboojiyaha (waqti gaaban, haddii ay jirto xaalad shaqo marka lagu jiro xaaladaha heerkulka hooseeya ee joogtada ah, waxaan kugula talineynaa dharka dukaannada qabow iyo barafeeyaha).
Dhididyo badan oo dhidibada loo ahow ayaa leh jeebado wax ku ool ah oo ay ku jiraan xajiimooyin, gaar ahaan loo qaddariyo xaaladaha waxqabadka.
Waxaan sidoo kale bixinnaa dhogorta midabbada digniinta iyo waxyaabo muujinaya, kuwaas oo si gaar ah ugu caan baxay shaqaalaha wadooyinka, shaqaalaha dhismaha, dhammaan noocyada iyo meelaha laga baxo. Qaar ka mid ah waxyaabaha dhididka leh waxay ku leeyihiin gogo 'isku dhejis ah dhexda, taas oo u oggolaaneysa oo keliya in aan la-qabsan karin dhididkaaga noocyo kala duwan oo muuqaal ah, laakiin sidoo kale xaaladaha cimilada.
Shirkado badan ayaa qadariyo shaqsi ahaaneed iyo shaqsi ahaaneed, gaar ahaan haddii shaqaaluhu door door wakiilnimo ka ciyaaraan xiriirada lala yeelan karo qandaraasleyaasha iyo macaamiisha.
Habka loo calaamadeeyo shaashadda kumbuyuutarka ee dharka
Waa sababtaas awgeed in dhogorta daabacan ay tahay shey caan ah oo dharka loogu talagalay noocyada kala duwan ee munaasabadaha bannaanka, taagan wakiillada, shirarka iyo tababarka.
Intii aan dhisaynayna deeqda, ma illaawin kii ugu yaraa. Dukaankayaga waxaad ka heli doontaa dhogorta loogu talagalay carruurta midabbo iyo cabbirro kala duwan leh. Waxaan sidoo kale u xardhay dharka ay ku qoran yihiin astaamaha iskuulada ama naadiyada iyaga loogu talagalay.
Wada cararaya Funaanado waa badeecada inta badan la xusho ee shaqsi ahaanta shaqada iyo dharka xayeysiinta.
Waxaan kugu casuumeynaa annaga dukaanhalkaas oo aad ka heli doonto tiro badan oo shaqo iyo xayeysiis xayeysiis ah.
4f dhogordhogorta adlerdhogorta haweenka ee eslodhogorta ugu fiicandharka shaqada dhogortadhogortadhogorta dumarkaoo lagu daray cabirkii dumarkaDumarka dhogorta shirkadahaDhogor haweenka leh dabooldhogorta carruurtajaakadaha dhogorta loogu talagalay gabdhahadhogorta shaqaalahashirkadda dhogortahi tec dhogortadhogorta raggaragga dhogorta allegrodhogorta shaqada ee raggadhogorta markii la codsadodhogorta milicsigasoosaaraha dhogortaxayaysiinta dhogortadhogorta shaqeeyashaqada dhogorta Allegrodhogorta shaqada ee milicsiga ahdhogorta dabka dabkadhogor militaridhogorta daabac lehdhogorta leh astaantadhogorta leh astaanta shirkaddadhogorta daabacandhogorta leh daabacaad shirkadeeddhogor jaban
Dalxiisyada iyo dushooda taangiyada
Funaanado / Polo
Koofiyadaha iyo koofiyadaha koofiyadaha
Jaakadaha / Vams
Kiishash / shaati
Jumlado / musqulaha
Dharka aragga oo sarreeya
ka eeg khariidadda
P&M Dhamaan xuquuqaha ayaa leh 2020
naqshadeynta iyo hirgelinta: pixelsperfect.pl - Websaydhada Poznań